Mpandraharaha Malagasy Mila tosika manokana
Sendikan’ny mpiasan’ny ministeran’ny tontolo iainana Mitaky ny hanovana ny ekipan’ny minisitra
Mbola mitohy hatrany ny fitokonana tanterahin’ireo sendika eo anivon’ny minisiteran’ny tontolo iainana eto amintsika.
Kolikoly avo lenta Depiote 7 hosamborina…
Nalaza fa nahatratra hatrany amin’ny 50 tapitrisa ariary isan’olona ny kolikoly ho sandan’ny fananganan-tanana nandaniana ny lalàm-pifidianana ny 3 aprily, ary misoko miadana ny fanadihadian’ny Bianco.
Fiarahamonina Malagasy Difotry ny kolikoly
Anisan’ny teny filamatry ny avy eo anivon’ny Eglizy Katolika Romanina eto Madagasikara na EKAR ny hoe « Reseo amin’ny soa ny ratsy ! ».
DGI sy SAMIFIN Hanakana ny vola maloto tsy hivezivezy
Omaly talata 17 jolay tetsy amin’ny biraon’ny SAMIFIN Ankasina no nanaovana ny fifanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa amin’ny fitantanana ankapoben’ny hetra (DGI) sy ny sampandraharaha Malagasy iadiana amin’ny famotsiam-bola sy ny famatsiam-bolan’ny fampihorohoroana.
Entan’ny Tiko tao Toamasina An-tapitrisany Euro norobain’ny fitondrana tetezamita
Nanamarika ny fanonganam-panjakana 2009 ny fandrobana ka anisan’izany ny fitaomana ny vary, lafarinina an’ny Tiko sy Mana an’i Marc Ravalomanana tao Toamasina ny 4 aprily hatramin’ny 31 aogositra 2009.
Anosibe-Anosy-Mahamasina Tena maloto, nodiovina tanteraka
Anisan’ny faritra tena maloto ny eny Mahamasina, Anosy ary Anosibe raha oharina amin’ireo faritra hafa eto an-drenivohitra.
Hery Rajaonarimampianina Nandrahona ireo mpampianatra mitokona
Hentitra ary hita tena nasiaka mihitsy ny filoha Hery Rajaonarimampianina tany Toamasina ary nampitandrina ireo mpampianatra mitokona, hoy indrindra izy. “Aza saziana noho ny fitivan-tenanareo mpampianatra ny mpianatra Malagasy.
Hotanterahina any Paris Frantsa manomboka rahampitso alakamisy 1 desambra ary hifarana ny zoma 2desambra izao ny fikaonan-dohan�ny mpitondra Malagasy amin�ireo mpamatsy vola.
Afak’omaly ireo minisitra 13 mianadahy anisan’ny hiatrika any no efa nandao an’i Madagasikara. Tanjona ny handresy lahatra ireo mpamatsy vola hamatsy ireo tetikasa 50 mipaka mivantana amin'ny fiainam-bahoaka mitentina 5 miliara dolara ao anatin'ny 5 taona. Vina ihany koa ny hitady sy hisintona ireo mpandraharaha hampiasa vola eto Madagasikara kanefa ny mpandraharaha Malagasy eto tsy homena hasina sy tsy raharahiana, fa vao mainka poretina aza. Sady tsy nihemotra no tsy niroso ny tontolon'ny asa fandraharahana teto Madagasikara tamin'ity taona ity, raha ny fanambaran’ny ny Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy (FIVMPAMA) tamin’ny alalan’ny filohany Eric Rajaonary. Tsy mbola misy ny tena fitsinjovana azy ireo, hany ka matiantoka noho ny olana maro sosona toy ny delestazy efa ho lava ny mpandraharaha kanefa mbola vesarana hetra isan-karazany. Ireo mpandraharaha Malagasy ireo aloha no tokony hitadiavam-bahaolana, raha tena hampandroso marina no tanjona fa tsy ny vahiny izay tsy maintsy hikatsaka ny tombony ho azy no mbola hatavezina eto.